သောသီခို: သန်းခေါင်စာရင်းမတိုင်မီ် ညီနောင်လူမျိုးစုများနှင့် ကရင်တို့ ပြင်ဆင်ရန်
သန်းခေါင်စာရင်းမတိုင်မီ် ညီနောင်လူမျိုးစုများနှင့် ကရင်တို့ ပြင်ဆင်ရန်
အေးရှားစတယ်ဒီ မှ ဂျပန်သုတေသီ ကာဇူတို အိုင်ကေဒါ ၏သုတေသနစာတမ်းတွင်မြန်မာပြည်ရှိကရင်လူဦးရေကို
ဖေါ်ပြထားရာ၌၁၉၃၁ ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်းအရ မြန်မာပြည်၏ ဒုတိယအများဆုံး လူမျိုးစုဟုဖေါ်ပြထားသည်။
တခြားစာတမ်းများအရ ၁၉၃၁ အင်္ဂလိပ်ခေတ် ကရင်လူဦးရေ ၁.၄သန်း ရှိသည်ဟုဆိုသည်။ ၁၉၈၃တွင်မူ တိတယ
ထိုသန်းခေါင်စာရင်းတွင် ကရင်ဗုဒ္ဓများကို ဗမာစရင်းတွင်ထည့်သွင်းထားခဲ့သည်ဟု သုတေသီတချို့ကဆိုသည်။
ကရင်ဗုဒ္ဓသည် ကရင်လူမျိုး၏ ၈၀ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိသည်ဟုလဲဆိုသည်။ ၁၉၄၂ ဂျပန်ခေတ်သန်းခေါင်စာရင်းတွင်
ကရင်လူမျိုး ၄သန်းခွဲ ရှိသည်ဟုမှတ်တမ်းရှိခဲ့သည်။ လက်ရှိလူဦးရေစာရင်းမှာ ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိကရင်လူဦးရေကိုသာ အဓိကထားသည်။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်၊ရန်ကုန်တိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်း တောင်ငူ ခရိုင် နှင့် တနသာင်္ရီတိုင်းရှိ ကရင်အမြားအပြားကိုနာမယ်ရှေ့ တွင်ကျောင်းသားအရွယ်မှစပြီး မောင်-မ တပ်ခဲ့ရာမှ ကြီးလာသောအခါဦး-ဒေါ်ဖြစ်သွားကြခါ ဗမာလူမျိုးစာရင်းတွင်ပါသွားသည်ဟုသုတေသီများက ထောက်ပြလေ့ရှိသည်။ ကမ္ဘာ့ပုံမှန်လူဦးရေတိုးနှုန်းဖြင့်တွက်ချက်လျှင် လက်ရှိမြန်မာတနိုင်ငံလုံးရှိ ကရင်လူဦးရေမှာ ၇သန်းမှ ၁၀ သန်း အကြားတွင်ရှိမည်ဖြစ်သည်။ သဘာဝဘေးဒဏ်နှင့်လူသားခြင်းမျိုးရိုးဖျောက်ဖျက်မှု လူလုပ်ဘေးဒဏ်များမရှိခဲ့မှသာ ထိုလူဦးရေပမာဏရှိနိုင်မည်လဲဖြစ်သည်။
Case study အဖြစ် ထိုင်းနိုင်ငံလူဦးရေကောက်ခံပုံတစေ့တစောင်းကိုကြားဖြတ်ဖေါ်ပြပါမည်။
ထိုင်းနိုင်ငံကကောက်ခံသော ၁၉၉၃ ခုနှစ် လူဦးရေစာရင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ကန္ချနဘူရီ၊ ကန်ဖဲန်ဖက်၊ ချင်းဂရိုင်း၊ ချင်းမိုင်၊တာ့က်၊
ပရကျွပ်ခီရိခန်၊ ဖက်ခ်ျဘူရီ၊ ဖရဲ့ ၊ နန့်၊ မယ်ဟောင်စောင်၊ ရာ့ခ်ျဘူရီ၊ လန်းပန်း၊ လန်းပွန်း၊ စူခိုထိုင်း၊ စူဖန်းဘူရီ နှင့် အူထိုင်းဌာနီ
ခရိုင်ကြီး(Province) (၁၅)ခရိုင်တွင် ကရင်ကျေးရွာစုစုပေါင်း ၆၉၃၅၃ ရှိပြီး လူဦးရေ ၃၅၂၂၉၅ ဦးရှိသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံတွင်
ထိုင်းသန်းခေါင်စာရင်းသည် ယုံကြည်ရသော ပထ၀ီနိုင်ငံရေးဟုချုပ်ခေါ်သည့် သမိုင်းရေး လူမျိုးရေး လူမှုရေး ဒေသန္ဒရရေး
ကုန်လုပ်ဆက်ဆံရေးနှင့်နိုင်ငံရေးအခြေအနေအောက်တွင်ကောက်ခံထားခြင်းဖြစ်သည်ကို စာရေးသူ၏ဘက်စုံ လေ့လာချက်များ
အရရပ်တည်ပြောဆိုနိုင်သည်။ အဆိုပါယုံကြည်ရသော ပထ၀ီနိုင်ငံရေးအခြေအနေဆိုသည်မှာ တိုင်းရင်းသားလူဦးရေအမှန်ကိုဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်
သမိုင်းမတင်မီခေတ်က ကရင် မွန် ၀ ခမာ ရှမ်းလူမျိုးတို့ ထိုင်းလူမျိုးမတိုင်ခင် ပေါက်ပွားနေထိုင်ကြသည်ကို
ထိုင်းနိုင်ငံသမိုင်းက တစုံတရာစိုးရိမ်မှုဖြင့်ဖုန်းကွယ်ခြင်းမပြုဘဲအတိအလင်းဖေါ်ပြချက်ရှိသည်။ နောက်နှစ်ရာပေါင်းများစွာတွင်
တခြားလူမျိုးများအားနည်းသွားပြီး ရှမ်းလူမျိုးများသာအများစုအဖြစ်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ရှမ်းကို လာအို မွန် ခမာ ကုလား
တရုတ်ပြင်သစ်နှင့် မလေး စသည်တို့ က ကုန်ကူးသန်းမှု နှင့် နယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှု ကိစ္စသဘောတူညီချက်စာချုပ်စာတန်းများပြုသော
အခါစယမ် (Siam) ဟု တရားဝင်ခေါ်ဆိုသုံးစွဲခဲ့ကြသည်။ ထို စယမ် (Siam) နိုင်ငံဟူသည့်အသုံးအနှုန်းကို ရှေးဦးကာလမှ
၁၉၃၉ ခုနှစ်တိုင်အေင်ခေါ်ဆိုခဲ့သည်။ ရတနာကိုးစင်းခေတ်(ဘန်ကောက်ခေတ်) မင်းဆက်(၅) က စယမ်မှ ထိုင် အဖြစ်သို့ 
ပြောင်းစေခဲ့သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံကတရားဝင်ရှိခဲ့သော ကျေးကျွန်စနစ်ကို ဘုရင်ကြီးက ရာသက်ပန်ဖျက်သိမ်းပစ်ကြောင်း
ကျေညာပြီး စယမ်နိုင်ငံမှ "လွတ်မြောက်နိုင်ငံ" ဟုတွင်စေခြင်းဖြစ်သည်။ ရှမ်းတို့ ၏ ပိုမိုရှေးကျသော နာမယ်ဖြစ်သည့်
"တိုင်" နှင့် နီးစပ်မှုရှိစေရန်ကိုလည်း ရည်ရွယ်ပုံရသည်။ "ထိုင်"ဆိုသည်မှာ ရွေးနှုတ်ခြင်း၊ လွတ်မြောက်ခြင်း၊
အာဘဖြေခြင်းစသောအဓိပ္ပါယ်ရှိသည်။ ထိုင် မှတဆင့် နိုင်ငံတကာ လူမျိုးတကာ တို့ ၏ အသံအနိမ့်အမြင့်အရ ထိုင်းဖြစ်သွားသည်။
မျက်မှောက်မြန်မာပြည်တွင်ပါဝင်သော ရှမ်းများမှာ မူရင်း "တိုင်" ဆိုသောနာမယ်နှင့် ကင်းကွာပြီး စယမ်(siam)ကို ရှမ်း(Shan)
ဟု မြန်မာသံ အင်္ဂလိပ်စာလုံးပေါင်းနှင့်ခေါ်ရာမှ အတည်ဖြစ်သွားခဲ့ပုံရသည်။ ယခုအခါတွင် မြန်မာပြည်ရှိရှမ်းများကလဲ
သူတို့ ၏မူရင်းပိုကျသော လူမျိုးနာမယ်ဖြစ်သည့်"တိုင်"ဟု သုံးနှုန်းခေါ်ဆိုရန် တောင်းဆိုမှုများအားကောင်းလာ
သို့ ရာတွင် ညီနောင်လူမျိုးစုမျိုးများအတွင်း နအဖအစိုးရလက်ထက်က အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာ
ချေမွှခွဲထုတ်ပစ်ခဲ့သည့် ၁၃၅ မျိုးဟူသည့် စာရင်းအရ မနုသလူမျိုးနွယ်စုသိပ္ပံအရစုစည်းမှုကိုဆန့် ကျင်သည့်သေးကွေးသော
လူတမျိုးစီအဖြစ်သို့ ကွဲထွက်ချင်လာနေသည်ကိုလဲတွေ့ နေရသည်။ မွန်လူမျိုးတမျိုးတည်းသာလျှင် မကွဲမပြားရှိနေသည်။
ကိုယ့်ထီးကိုယ့်နန်းနှင့်တိုးတက်ခန်းနားထယ်ဝါခဲ့ဘူးသော လူမျိုးတမျိုး၏ လက္ခဏာဖြစ်သည်။
ကျနုပ်တို့ ကရင်ညီကိုများသည် ရှေးဦးကာလကတမျိုးတည်းဖြစ်ခဲ့သဖြင့် အင်အားကြီးမားခဲ့သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင်
အမျိုးမျိုးကွဲပြားသွားခဲ့ရာမှ လူမျိုးငယ်အဖြစ်သို့ ရောက်ရသည်။ တခြားညီနောင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများလဲ
ဤအချက်သည် မကြာမီဖြစ်ပေါ်လာမည့် သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ခံသည့်အချိန်မတိုင်ခင် ညီနောင်လူမျိုးစုအားလုံး
သတိမူကြရမည့် ကိစ္စများဖြစ်သည်။ ကရင်လူမျိုးများအနေနှင့်မူ ကရင် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ များ၊ တရားဝင်နိုင်ငံရေးပါတီများ၊
ကရင် အမျိုးသားအတွင်းမှကရင်စာပေအသစ်လူမျိုးအသစ်တည်ထွင်သူများ၊ ကရင်လူမှုအဖွဲ့ အစည်းများ၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့ 
အစည်းများအားလုံး အချိန်မီ တွေ့ ဆုံညှိနှိုင်းကြသင့်သည်။ ထိုအဖွဲ့ များသည် ဤမျှအရေးကြီးပြီး လက်ရှိဥပဒေကို
မချိုးဖေါက်ဘဲ လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ဤအမျိုးသားတာဝန်ကိုမျှမထမ်းဆောင်ကြလျှင် ကရင်လူမျိုးတို့ အတွက် သူတို့ ထံမှ
ဆိုင်းပေးရန် ဘ၀တူညီနောင်လူမျိုးစုအားလုံးနှင့် ဟန်ချက်ညီညီ ၀ိုင်းဝန်းတောင်းဆိုကြရမည်ဖြစ်သည်။
This way was their main strategy in Burmese Government.They killed and fought everywhere but the did not get any sufficient for them than control by census. Therefore, every ethnic groups must to wake up and unite to reflect something in right now.Don not take time too long and wait and see what will happen in the future!
It is the fucking Census. It only happen in Bullshit Burma or Myanmar or whatever country you wanna call. The census means collect population other words counting everyone in the country. The point is you will know the population and how many ethnics and clans in the country. I does not come with any filled up blank. You can put whatever clan or ethnic you are in the form and the government has to put it in their data and know what is in their country. My suggestion is if the form already filled just write "bullshit" or "fuck you government" in the area of ethnic and clan